Home » Stuff for Sale » Other Stuffs to Sell » တင့်တယ် KC Reg ယောကျာ်းလေး Bulldog ခွေးကလေး
City: Kachin State
Address: Kachin State
Email Address: sisterbakinoel@gmail.com
Listed: June 9, 2015 7:33 pm
27 ချီတက် 2015 ခုနှစ်,2ခွေးမနှင့်3ယောက်ျားလေးများ၏တငျ့တယျအမှိုက်သရိုက်များမွေးဖွားခဲ့ပြီး။ အားလုံးသည်ခှေးပေါအပြည့်အဝ KC5မျိုးဆက် pedigree မှတ်ပုံတင်နှင့်အပြည့်အဝခွေးကလေး pack, မွေးစောင်နှင့်4ပတ်ကြာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အာမခံနှင့်အတူ လာ. နေကြသည်။ အားလုံးသည်ခွေးကလေးတွေနဲ့အတူကြီးမားတဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပြည်သို့ဆောင်ခဲ့ခံရကောင်းစွာလူမှုရေးဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့က2ပတ်အဟောင်းနှင့်သူတို့ကျန်းမာ pups ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ပုံမှန် vet စစ်ဆေးမှုများရှိခဲ့ခြင်းမှ worming နှင့်အတူ up to date ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကယခုကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီနှငျ့အိမျကိုအစဉ်အမြဲရှိသည်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်သင့်
Ad Reference ID: 8535575d62a6f99a
Listed by: sisterbakinoel
Other items listed by sisterbakinoel
Latest items listed by sisterbakinoel »
All times are GMT 6.5. The time now is 7:13 am.